» द भोइस अफ नेपालमा जज नै रुन थालेपछि दर्शकपनि रुन थाले, के भयो त्यस्तो? हेरौँ (भिडियो सहित) द भोइस अफ नेपालमा जज नै रुन थालेपछि दर्शकपनि रुन थाले, के भयो त्यस्तो? हेरौँ (भिडियो सहित) – हाम्रो खबर
द भोइस अफ नेपालमा जज नै रुन थालेपछि दर्शकपनि रुन थाले, के भयो त्यस्तो? हेरौँ (भिडियो सहित)
admin 1621 Views
दि भ्वाइस अफ नेपाल सिजन–३’ को डिजिटल अडिसन सुरु भएको छ । नेपाल`को नम्बर एक गायन रियालिटी शोको रुपमा स्था`पित भइसकेको ‘दि भ्वाइस अफ नेपाल’ हिमाल`य टेलिभिजनले उत्पा|दन र प्रसारण गर्दै आएको छ । नेपा|ली टेलिभिजन रिया`लिटी शोका सवै`जसो रेकर्ड तोड्दै ‘दि भ्वाइस अफ नेपाल–२’ले करोडौं नेपालीको मन जितेको थियो ।